Kpụrụ, njirimara na atụmanya ngwa nke oriọna oriọna
Mkpa ọkụ agbakwunye na Greenhouse N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, site na mmụba na ntozu oke nke ihe ọmụma na teknụzụ, oriọna nke ihe ọkụkụ, nke a na-ahụta dị ka akara nke ọgbara ọhụrụ nke ịkọ ugbo na China, ejirila nke nta nke nta banye n'ọhịa nke ọhụụ . Na ...
Gini mere ịhọrọ iko quartz maka igwe oriọna ultraviolet?
Ọ bụghị akụkọ na ụzarị ultraviolet nwere ike igbu nje, enwere ike ịhụ ya ebe niile na ndụ anyị na-adị kwa ụbọchị —- italslọọgwụ, ụlọ nyocha, ọbụlagodi ụlọ nke aka ha, ọ bụrụhaala na ọ dị mkpa maka nwoke ịga ụlọ ọgwụ, oriọna UV agaghị adị. Principlekpụrụ nke ultraviolet oriọna nwoke A ...
A na-atụ anya na nkwado iwu, enwere ike ịtụ anya atụmanya ọkụ ọkụ
N'ịbụ ndị ụkọ nri na ọgwụ na-ebute site na ọrịa zuru ụwa ọnụ, ma ọ bụ ahịa North America maka ịkọ ihe ọkụkụ, ma ọ bụ ahịa Europe maka ịkọ ihe ọkụkụ n'ime ụlọ dị ka akwụkwọ nri, melon na mkpụrụ osisi, yana mmụba. ..
COVID-19 na-eweta mkpa maka UVC
COVID-19 emeela ka ọtụtụ ọrụ akụ na ụba kwụsị, ma dịka ụmụ mmadụ na-amalite ịmalite ime mgbanwe maka ihe ọhụrụ, otu n'ime ngwa ngwa ochie abịawo dị ka nlọghachi. Ọ bụ ìhè ultraviolet (UV), na ọkachasị nje na-egbu C-band (UVC) nke ultraviol ...